Amin'ny teny arabo - Departemantan'ny Midden Atsinanan'i Azia Atsimo Fiteny Kolontsaina - Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Amin'ny teny arabo - Departemantan'ny Midden Atsinanan'i Azia Atsimo Fiteny Kolontsaina
Q: izaho no tanteraka mpanao voalohany
Ny Teny arabo Fandaharana ao amin'ny Oniversiten'i Virginia dia naorina tamin'ny tapaky ny taona dia laharana faha iray amin'ireo ambony indrindra amin'ny mpianatra isa eo fiteny vahiny tany amin'ny OniversiteEnina ambin'ny folo antokony dia nanolotra isaky ny enim-bolana ny amin'ny fisoratana anarana ny momba ny ny mpianatra. Amin'izao fotoana izao, dia misy enina ny fotoana feno sampam-pianarana ireo mpikambana izay fanatitra manarona lafiny samihafa ny teny, ny haisoratra, sy ny kolontsaina.
Amin'izao fotoana izao, ny fandaharam-potoana efa-taona dia manolotra ny Ankehitriny Fitsipika arabo, fuchsia, ankoatra ny taranja ao dialectal teny arabo.
Toy izany fanatitra hahafahan'ny undergraduate ary nahazo diplaoma ireo mpianatra mba matriculate ao ilaina ny fianarana ny teny takiana amin'ny isan-karazany ny Oniversite sampan-draharaha toy ny ara-Pivavahana, Fianarana, Politika, sy Tantara, ankoatra ny hafa.
Izay ny mpianatra no tokony hisoratra anarana
Ny fandaharana ny teny arabo taranja handrakotra mpahay teny arabo, ny teny arabo ny fitsipi-pitenenana ary ankehitriny ny literatiora sy ny kolontsaina, ankoatra ny taranja ampianarina amin'ny teny anglisy izay fifanarahana amin'ny teny arabo ny literatiora sy ny kolontsaina. Mpianatra hahazo ny fahafahana ny fianarana ny teny arabo ao amin'ny isan-karazany ny firenena Arabo, indrindra fa any Maraoka, amin'ny alalan'ny U. nanohana ara-bola ny fandaharana: Ny UVA ao Morrocoy fandaharana. Ny Teny arabo Fandaharana matetika manolotra amin'ny taona voalohany ny teny arabo (ARAB) ary ny faharoa-taona ny teny arabo (ARAB) ao amin'ny vanin-taona mafana Teny Institute.
Tsy afaka mamaky ny teny arabo Abidia sy ny tsy manana fahalalana misy ny voambolana.
Misy kilasy ny fandaharana ho an'ny mpianatra tahaka ahy? A: mazava ho azy. Mariho tsara fa mazava ho azy fa ity no natolotra afa-tsy ny Latsaka ny enim-bolana. Raha toa ka tsy handray ny enim-bolana voalohany ao amin'ny fahalavoana, dia tsy maintsy miandry mandra-manaraka lavo.
A: Ianao no manana ny safidy ny sekoly io amin'ny ARABO, na mandray ny fametrahana ny test.
Jereo amin'ny Teny arabo Fandaharana Mpandrindra mba handamina izany fitsapana izany. Q: izaho hamindra ny mpianatra Ao ny teo aloha ny oniversite, dia naka teny arabo taranja. Aho afa-miala amin'ny U Va. 's Fiteny Fepetra takiana amin'ny teny arabo? A: Amin'ny Oniversiten'i Virginia dia mitaky anao mba hamita efatra semesters ny teny arabo (miisa enina ambin'ny folo nahazoan-dalana), izay kilasy hihaona dimy ora isan-kerinandro. Raha toa ka natao ny mitovy ny isan'ny ora ao amin'ny teo aloha oniversite amin'ny toy izany koa ny fitaovana feno, dia mety ho afa-miala. Mba hatolotrareo ny fitànana an-tsoratra avy amin'ny teo aloha oniversite ny Teny arabo Fandaharana Mpandrindra. Q: teraka ivelan'ny Tontolo Arabo, fa ny fianakaviana dia miteny arabo ao an-trano. Miteny arabo ihany koa, fa izaho no tsy mamaky na manoratra amin'ny teny arabo tsara. A: Ianao no nanoro hevitra mba hisoratra anarana ao amin'ny tontolo ARABO. Masìna ianao, miteny amin'ny Teny arabo Fandaharana Mpandrindra. A: Vita ny telo taona voalohany ny teny arabo, ny fepetra takiana ho an'ny mpitarika ny mpianatry ny faritra Afovoany Atsinanana sy Fanadihadiana momba ireo kilasy dia tsy isaina ho bola. Teny fampidirana ny feo sy soratra rafitra ny teny arabo, anisan'izany ny fototra didim-pitsarana rafitra sy ny morphological ny lamina. Ny fitambaran'ny mivantana, teny-lingual, ny fahaiza-monina, ary fandikan-teny fomba ampiasaina. Ny endrika dia ahitana ny kilasy ny fifanakalozan-kevitra ny sasany, fitsipi-pitenenana fotoana narahan'ny be fanao.
Fanarenana ny Alimony ao Okraina avy ireo Olona Monina any Ivelany
Gofynion ar gyfer Islamaidd Contract Priodas